नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो | Everest Times UK
भर्खरै नवनियुक्त उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोको बहुराष्ट्रिय राज्यको अभिव्यक्तिमाथि एउटा चेतनाले हमला गर्‍यो । हुन त मन्त्री महतोसँग मेरो कुनै लेनादेना छैन तर जसले बोलेको भएपनि बहुराष्ट्रिय राज्यबारे नेपाली समाज र आफूलाई विद्वत वर्ग भनेर दाबी गर्नेको जुन मनोदशा छ । त्यसप्रति टिठ लागेर आयो । यो नलेखौ भन्दा पनि चुप लागेर बस्न सकिएन किनकि यो निम्छरो मनोदशाको हमला एकपटक होइन, नेपालको इतिहासमा पटक पटक दोहोरिएको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको स्थापना गरेर राष्ट्र निर्माण पश्चात मात्र राज्यको निर्माण भएको भन्दै बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अघि सारे । त्यसबेला पञ्चायती स्कूलबाट उत्पादित प्रजातन्त्रको कलेवरमा हुर्किएको नयाँ अवतारीले यो अवधारणाको विरोध गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको बखत पनि बहुराष्ट्रियताको बहसले निकै चर्चा लियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्ने बारेमा ब्यापक छलफल भयो । अन्ततः एकल जातीय अहंकारवाद यसको वाधक बन्यो । तरपनि बहुराष्ट्रियताको अवधारणा अनुसार संविधानले सामाजिक उत्पीडन सहित बहुल विविधतालाई स्वीकार गर्न बाध्य भयो । त्यस्तै २०७७ बैशाख १० गते समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच भएको एकताको सहमति पत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्य सुहाउँदो समाजवाद, सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादको विकास गर्ने भनिएको थियो । त्यसबेला केही समूहले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता खारेजीको निवेदन नै दिए । त्यसबेला पनि सडकमा नाराबाजी र होहल्ला भयो, अहिले पनि चेत उहीँ तर अलि फरक मान्छेहरूले त्यहीँ श्रृंखला दोहोर्‍याई रहेका छन् । यो समाज बदल्न नदिने पुरातन चेतको अन्त्य नभएसम्म यस्ता प्रहसन धेरै देखिने वाला छ । जे होस् बहसमा आयो, यो राम्रो कुरा हो ।
बहुराष्ट्रियताको विपरीत हाम्रो मुलुकमा लामो समय अभ्यासमा रहेको एकल राष्ट्रियताले के गर्छ भने त्यस्ता फरक फरक मानव समुदायको विविधतालाई मूल प्रवाहीकरणको नाममा एउटै धारमा हिँडाउने कोशिस गर्दछ । एलक राष्ट्रिय राज्यको सबै अंगमाथि एउटै राष्ट्र समूहले नियन्त्रण कायम गरेको हुन्छ । सबै मान्छेलाई एउटै भाषा बोल्ने, एउटै संस्कृति मान्ने, एउटै धर्म मान्ने र एकैखालको सोचाई बोक्ने बनाउनु एकल राष्ट्रियता पक्षधरको अन्तर्निहित उद्देश्य हो । जसरी नेपालको सन्दर्भमा २५० वर्षदेखि यहाँको विविध पाटा, पक्षहरूलाई एउटै खस हाँडीमा हालेर घोल्ने र त्यसबाट एउटै रंग निकाल्ने आज पर्यन्त प्रयास गरिदै छ । यस्तो गर्नु भनेको आन्तरिक द्वन्द्वलाई कायम राख्नु हो जुन कुनै पनि दिन विस्फोटन हुन्छ । चीनियाँ राष्ट्पति सी चीन पिङले भनेका थिए– यदि सबै सभ्यतालाई एउटै रंग रूपमा ढाल्ने हो भने यो संसार बस्नका लागि एकदमै निरस हुन्छ । पिङको भनाई जस्तै नेपाललाई त्यस्तै रंग विहीन निरस देश बनाउन खोज्नेहरूले नै अहिले बहुराष्ट्रियता विरुद्ध उछालिरहेका छन् । जंगलमा अरु सबै जनावर सिद्धिएर सिंहहरू मात्रै बस्यो भने कस्तो होला ? कल्पना गर्नुस् । एउटै जनावर मात्र बस्ने र एउटै खालको वोटविरुवा मात्र हुने जंगल हुँदैन । त्यस्तो उजाड र निरस ठाउँलाई जंगलको परिभाषाले समेट्दैन । त्यस्तै नेपालमा पनि एउटा भाषा, एउटा संस्कृति मान्ने मान्छे मात्रै भयो भने त्यो ज्यादै निरश हुनेछ । त्यस्तो एकल समाजले नेपालको बृहत् उचाईलाई बोक्न सक्दैन । संसारले चिनेको देश नेपाल बहुराष्ट्रिय चरित्रको हो । जसलाई यहाँका जातिहरूको विविध सभ्यताको एकताले थेगेको छ ।
त्यसैले के बुझौ भने राज्य भनेको क्षेत्रगत रुपमा शासन सञ्चालन गरिने खास जनसङ्ख्या सहितको व्यवस्था हो भने राष्ट्रले विभिन्न समुदायलाई भावनात्मक रूपमा समेटेको हुन्छ । त्यही राष्ट्रिय भावनामाथि राज्य उभियो भने त्यो बलियो बन्छ । जनताको आत्मिक एकता सहितको राष्ट्रियता नभएको राज्य केवल जनताको एकतामा बाधा पुर्‍याउने एउटा मेसिन सरह मात्रै हुनेछ । नेपाल देशभित्र विभिन्न जातिहरूको सभ्यताले विकास गरेको लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, मगरात, तमुवान, थरुहट, खसान जस्ता ऐतिहासिक राष्ट्रहरू आजपनि जीवित छन् । अझ यसभन्दा सानो भूगोलको आकारभित्र समेटिएका थुप्रै राष्ट्रहरू पनि छन् । ती भूगोलको विविधता आज पनि सुरक्षित छ । जो देशको सम्पत्ति हो, जसलाई राज्यले सधैं अनदेखा गरिरह्यो । आफ्नो घरभित्रको सम्पत्ति नदेख्ने दृष्टिविहीन राज्य सधैं अरु सामू मगन्ते बनेर मागिरह्यो । नेपाल नामको बगैंचाभित्र अनेक थरीका रङ्गीविरङ्गी फूलहरू फुलेका छन् । ती प्रत्येक फूलको आफ्नै रङ, सुगन्ध र सौन्दर्यता छ । त्यसको आफ्नैखाले महत्व छ । ती रंगीन फूलहरूमा एकले अर्कोलाई सेप होइन कि सबैलाई समान ढंगले हुर्कने र फुल्ने अवसर दिनुपर्छ । तर जातिवादी राज्यसत्ताले सबै फुलहरूलाई समान ढंगले फुल्न दिएन । सारमा यसले मुलुकको विविधतालाई सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेन र सधैँ बाधा र बोझको रूपमा लियो । राज्यको साधन, स्रोत सबैमा वितरण गर्दा मुलुक विखण्डन हुने देख्यो । मुलुकको यो हविगत हुन पुग्यो । त्यसैले उत्पीडित राष्ट्रहरूबाट सञ्चालित समग्र आन्दोलनको अभिव्यक्ति स्वरूप प्रस्तुत बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा मुलुकलाई अनन्तकालसम्म जोड्ने अचूक सुत्र हो ।
एनआरएनए बियोन्ड २०२१ : फ्रेन्डसिप काउन्सिल किन र केका लागि ?
योगी स्वामी विकाशानन्द : ‘अर्बौं मान्छेहरुमा तिमी एक मनपर्ने मान्छे’